စာရင်းသွင်းဖို့ကိုဘယ်လို - အလယ်ပိုင်းဘာသာစကားများကျောင်း, ကိန်းဘရစ်
PDF ကိုကျောင်းအပ် Form ကို
အဆိုပါဖြည့်စွက် အွန်လိုင်းကျောင်းအပ် Form ကို နှင့်သင့် application ကိုကျောင်းစေခြင်းငှါစေလွှတ်လိမ့်မည် OR ပုံစံကို download လုပ်ပါနှင့်ဖြည့်ပါ နှင့်, အီးမေးလ်ဖြင့်ငါတို့အား post ကိုပို့ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းရုံးသို့လူကိုယ်တိုင်ဆောင်ခဲ့ကြ။
(1 ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းနေရာထိုင်ခင်းဘွတ်ကင်ကြေးများအတွက်သင်တန်းနှင့်နေရာထိုင်ခင်းစရိတ်) ကိုသိုက်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏သင်တန်းစာအုပ်ဆိုင်များနှင့်နေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ကသင်၏သိုက်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါသင့်ရဲ့သင်တန်းနှင့်နေရာထိုင်ခင်းအတည်ပြုနှင့်သင်လက်ခံ၏ပေးစာပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ non-အီးယူကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးကိုဗြိတိန်ကျောင်းသားဗီဇာရရှိရန်ဒီလက်မှတ်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအပေါ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည် ဗီဇာသတင်းအချက်အလက်စာမျက်နှာ.
သင်တန်းစတင်မီနှစ်ပတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပယ်ဖျက်လျှင်လည်းကျနော်တို့သိုက် မှလွဲ. အားလုံးအဖိုးအခပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျထက်နည်းနှစ်ပတ်အတွင်း cancel လျှင်သင်တန်းစတင်မတိုင်မီငါတို့ရှိသမျှသည်အဖိုးအခများ 50% ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးကိုဗြိတိန်ကျောင်းသားဗီဇာအဘို့သင့် application ကိုမအောင်မြင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ရုံးဗီဇာငြင်းဆိုသတိပြုပါလက်ခံရရှိရက်နေ့တွင်, သင်တန်းနှင့်နေရာထိုင်ခင်းသိုက် မှလွဲ. အားလုံးအဖိုးအခပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
သင်သင်တန်းရဲ့ start ပြီးနောက် cancel လျှင်ကျနော်တို့မဆိုပိုက်ဆံမပြန်မလာကြဘူး။
'' ကိုသွားပါ ကျေးဇူးပြု.အခကြေးငွေသို့မဟုတ်သိုက်ပေးဆောင်'
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကမ်းစာစောင် View - ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ
အဆိုပါကျောက်စာ Yard ရေးစင်တာ
41B စိန့် Andrews ကလမ်း
တယ်လီဖုန်း: + 44 (0) 1223 502004
© 2017 ဗဟိုဘာသာစကားကိုကျောင်း, ကိန်းဘရစ်